Golaha Wasiiradda oo Shir Deg Deg ah ka yeelanaya Fadeexadii Qalbidhagax, Go’aanana soo saaraya. – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 On Sep 5, 2017
Golaha Wasiiradda Xukuumadda Federaalka Somalia ayaa la isugu yeeray Shir aan caadi ahayn si ay warcad uga soo saaraan Arrinta C/kariin Qalbidhagax oo ah Muwaadin Soomaali ah oo Itoobiya loo gacan galiyay.
HornAfrik waxay Xog ku heshay in Arbacadda 10:00 Barqanimo la isugu yeeray Golaha Wasiiradda Somalia Shir aan Caadi ahayn, Waxaana Shirkaasi gudoominaya Raiisul Wasaare Xasan Cali Khayre, iyadoona Shirkaasi ay Xukuumaddu si rasmiya ugu cadayn doonto Mawqifkeeda ku aadan Fadeexaddii Qalbidhagax iyo sidii ay wax u dhaceen.
Raiisul Wasaare Khayre ayaa lagu waramayaa inuu aqbalay inay Xukuumaddu qaadato Masuuliyadeeda, isla markaana u sharaxdo Shacabka wixii dhacay iyo Qaladkii ay galeen, Waxaana la xaqiijiyay in cadaadis dheer kadib uu Khayre oggolaaday in Xukuumaddu uu hogaamiyo ay qirato inay lahayd Masuuliyadda wixii dhacay, isla markaana ay soo bandhigto duruufaha ku qasbay.
Kulan dheer oo ay wada qaateen Caawa Madaxwayne Farmaajo iyo Raiisul Wasaare Khayre ayeey iskula qaateen in Fadeexadan laga badbaadiyo Madaxwaynaha, Masuuliyaddana ay qaadato Xukuumadda, Waxaana uu Khayre qiran doonaa Bari inay Xukuumadda Somalia ku wareejisay Qalbidhagax Dowladda Itoobiya, iyadoo fulinaysa Heshiis Labada Dowladood dhex maray.
Raiisul Wasaare Khayre iyo Agaasimaha Madaxtooyadda Fahad Yaasiin ayaa wada qoray Warsaxaafadeedka barri loo akhrin doono Shacabka. Waxaana loogu talagalay Warsaxaafadeedkaasi uu ka dhimo Culayska Siyaasadeed ee soo wajahay Madaxwayne Farmaajo, balse waxa uu soo dadajinayaa in Raiisul Wasaare Khayre uu ku baxo qirashadda arrintaan uu qiranayo inay samaysay Xukuumaddu, walinu ku adkaysanayso.
Baarlamaanka Oo Aan Shiri Doonin Arbacadda, Maxay tahay Sababtu,?